डिस्चार्ज भएपछि क्षमा माग्दै रोंए डा. केसी (पुरा पढ्नुहोस्) – Fewa Times
प्रकाशित मिति: August 7, 2018 4:55 pm
साउन २२, काठमाडौँ –अनशन तोडेर १३ दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका डा. गोविन्द केसी आज डिस्चार्ज भएका छन् । ६ दिन लामो आसीयूको बसाइ र एकसाता अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएका डा. केसीको स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आएपछि आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।
डा. केसीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । सम्मेलनमा बोल्दै डा. केसीले २७ दिनसम्मको अनसन र त्यसपछि पनि उपचारका क्रममा बिरामीको सेवा गर्न नपाएको भन्दै भावुक हुदै विरामीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमा मागेका छन् ।
‘यो अनसन मेरा निम्ति बाध्यता थियो’, उनले भने, ‘यस अवधिभर बिरामीको सेवा गर्न नपाएकोमा क्षमा चाहन्छु।’
डा. केसीले सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। यदि त्यसमा छलछाम भएको खण्डमा कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौं तर सरकारले अब फेरी आन्दोलन गर्ने बाटो दिदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’ उनले भनेका छन् ।